Hevitra MPANOHARIANA | Mey 2009
Ato Amin'ny Ambasadin'ny Madagasikara eto Paris aho, hoy Rinah Rakotomanga sy vaovao hafa
2009-05-22 @ 19:51 in Politika
Ho fanombohana dia indro ny kabarin'ny mpanao gazety Evariste nandritra ny fihetsiketsehana teny Ankorondrano ny zoma 22 mey 2009 : Miarahaba ny mpiara-mitolona teto amin'ny Magro. Efa elaela tsy nifandrenesana, 17 andro izay. Miarahaba daholo e! Mbola ao tsara daholo an? Voalohanteny dia mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra Ray Tsitoha, izay mandahatra ny fandaharana rehetra nahatonga izao zavatra rehetra izao sy ny fahafahana, izay tsy azo adinoina mihitsy satria izay no tena anton'ny fahafahana. Faharoa manaraka izany, dia misaotra indrindra indrindra antsika mpiara-mitolona, izay araka ny tatitra, izay heno ihany ny akony na dia sarotsarotra aza ny fifandraisana. Avy amin'ny vavaka nataontsika iray manontolo no nahatonga ny fahafahanay tahaka izao. Fahatelo, dia misaotra ny fianakaviana tsy nitandro hasasarana tamin'ny fanampiana, fanateran-kanina nanomezana hery tany amin'ny toerana misy anay tany.
Fahaefatra dia tsy hay ihany koa ny tsy hisaotra ny namana mpanao gazety maro be izay nanohana hatramin'ny farany, ary henonay foana. Tsy mbola nisy fihetsehan'ny mpanao gazety tahaka izany araka ny fahatsiarovanay nanaovanay ity asa ity. Ka dia tohizo ry zalahy a! aza matahotra miteny ny marina izany, fa na dia tsy mahitsy ary ny filazana azy, misy fomba hafa azo hitenenana ny marina izany foana. Ary mahatonga ny asantsika ho kanto ny filazana ny marina somary misy ohabolana sy ny hainteny sy ny karazany izany fa aza kivy mihitsy e! Ny marina tsy maty izany, fa fisaka io saro-tadiavina.
Dia misaotra ireo izay nandefa anay tany amin'ny fonja ihany koa. Soa mba nisy mpanao gazety niaina tany hitantara ny zavamisy marina fa misaotra azy. Hisy ny fotoana ahafahana mitantara ny zavatra fa misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra. Asaivo ampitaina amin'ny tompon'andraikitra fa izahay vonona hatramin'ny farany ny amin'ny fitenenana tahaka izao. Tsy mitsoaka amin'izany isika fa isika milaza ny marina hatrany. Dia ity misy anankiray satria any amin'ny toerana itazonana anay tsy mahazo miresaka politika any, fa izahay mianakavy dia ireo solombavambahoaka, sy ireo mpiambina ny HCC (sy ny karazany ireny) dia afaka miresaka tsara izahay. Rehefa miresaka izahay dia miresaka zavatra hafa fa ny politika tsy azo resahina. Dia miara-mihira izahay, miara-mitendritendry gitara, miara-manala azy araka izany. Fa mbola angatahina amintsika ny mivavaka ho azy ireo fa izay no tena zavadehibe indrindra. Dia mba nisy ihany anankiray nampita ny resaka fa ny hany tenenina fotsiny dia hoe mahereza daholo. Izay ihany no hafatra nampitaina avy amin'ireo namantsika ireo. Salama tsara daholo izy ireo na misy anankiroa aza somary mba voan'ny isery kely ihany fa dia mifanohana tanteraka izy ireo ny any amin'izany toerana izany fa aza matahotra isika, fa tohizana hatrany ny tolona o! Mahereza daholo.
Fampitandreman'i Alain Andriamiseza sy Zafilahy
Tao amin'ny kabary nifandimbiasana ihany koa no nitenenan'Atoa Alain Andriamiseza tamin'ny mpitondra tao amin'ny FAT hoe : "raha toa ka tsy mivoaka mandrapahatongan'ny alatsinainy ireo namantsika migadra dia tsy maintsy mandray andraikitra izahay,(horaka) tsy maintsy handray andraikitra izahay manomboka amin'ny Talata rehefa tsy misy ny resaka mikasika an'izy ireo any amin'izay fifampidinihana izay atao any. Mbola manam-potoana isika roa andro hieritreretan'ny ao amin'ny HAT amin'izay zavatra tokony azo atao. Mangataka aminareo aho fahazoan-dalana manao izany. Izahay ao amin'ny Alliance democratique dia mamerina fa mandrapahatongan'ny alatsinainy, tsy misy ny zavatra mikasika azy ireo dia tsy maintsy handray andraikitra izahay Alliance democratique".
Namerina ihany koa ny depiote Zafilahy ho fampitandremana ny mpiara-mitolona kosa indray fa: "Aoka isika ho malina, aoka isika hitandrina tompokolahy sy tompokovavy, fa efa kely sisa dia hahomby ity tolona ity. Fa inona moa no takiantsika eto, dia ny fiverenan'i dada, fa raha tsy mitaky an'izay (isika) efa lasa nifindra tany amin'ny TGV. Fa matoa mbola eto isika mianakavy dia mitaky ny fiverenan'i dada tompokolahy sy tompokovavy. Ary izao no zavamisy, matoa isika mitaky an'i dada hiverina aty dia noho ny fitiavatsika azy. Noho ny asa soa (fampandrosoana) vitany ho an'ny tanindrazana. Dikan'izay matoky an'i dada isika mianakavy." Dia nametraka moa izy fa raha matoky an'i dada dia tokony hatoky ny olona izay notendreny any amin'ny dinika "savaranonando", ary ireo solontena ireo indray no mitatitra isan-kariva ny resaka fifampidinihana any amin'i filoha Marc Ravalomanana.
Niantso tao amin'ny matv Rtoa Rinah Rakotomanga
Ny vaovao hafa ankoatra izay, niantso tao amin'ny matv Rtoa Rinah Rakotomanga nilaza fa tsy voaroaka tao amin'ny ambasadin'i Madagasikara any Paris araka izay hita ao amin'ny aterineto izany ny tenany fa tafiditra soa aman-tsara ao amin'ny ambasady. Ny antony tsy nisokafan'ny Ambasady, araka ny filazany, tamin'ny alarobia teo dia noho ny fanamboarana ny vavahadin'ny ambasady fa tsy nisy izany fitokonana nataon'ny mpiasan'ny ambasady izany. Nilaza moa izy fa ao amin'ny ambasady mihitsy no miantso, ary handeha hody izy izao, mbola misy, araka ny nolazainy ny fifampidinihana amin'ny Gtt (miisa 25 eo ho eo) ao amin'ny birao ao ambony ao... fa efa mandeha ihany koa ny fikarakarana ny états généraux amin'izao fotoana izao. Dia anjaranareo any Paris indray no mamaly na manitsy izany tenin-dRtoa Rinah Rakotomanga izany raha misy ny madilana tokony hotentenina.
Ary farany androany kosa indray, hiverina kely amin'ny tolona aho: Ity Zoma 22 mey ity araka ny fijeriko azy no betsaka indrindra ny olona nanatrika ny fihetsiketsehana teny amin'ny Auditorium (tsy miresaka ny eny Ambohijatovo aho) raha ny sary no jerena, (tsy tany aho amin'izany fotoana izany fa ny sabotsy no mieritreritra ny ho any). Ny nanaovana tampoka ny andro ho andro tsy iasana ka nanararaotan'izay niasa no mety ho anton'izany fahamaroan'olona io andron'ny zoma io. Rehefa tsy hiasa ihany, hoy angamba ny olona, dia aleo mba mandeha eny Ankorondrano. manaraka izany ihany koa dia tsyfantatrona fanapahan-kevitr'iza na ahoana fa betsaka tamin'ny fefy fanitso namefena ny Auditorium sy ny magro Ankorondrano no noesorina (na nisy nangalatra) mba hahitan'ny eo ivelany ny hamaroan'ny olona ao anaty fefy. Betsaka tamin'ireo tsy sahy mitsiritsirika tao anatiny tao no gaga avy eo nahita ny hamaroan'ny olona mivory ao rehefa niala amin'izay ny fefy fanitso nanakona taloha. Mety hanome hery ny olona tsy mpankeny Ankorondrano nefa mpankeny Ambohijatovo ny tahaka izany. (Tena gaga mihitsy aho rehefa miresaka aman'olona mpandala ny ara-dalàna fa misy mihitsy ireo tsy mpankeny Ambohijatovo nefa mpankeny Ankorondrano ary misy ihany koa ny mifamadika amin'izany... noho ny halavirantany ve no mahatonga izany?)
Fa naninona no nahazo an'Ambohijatovo tamin'ny zoma sy sabotsy heriny?
Dia eto koa aho no manararaotra ny hevitra niposaka tao anatiko tao, mieritreritra ny antony namelana vetivety ny mpanaraka ny ara-dalàna hivory teo Ambohijatovo tamin'ny faran'ny herinandro lasa iny. Heveriko fa nisy tetika manokana ny namelana vetivety ny mpanohana ny ara-dalàna hanitsaka an'Ambohijatovo, dia ny fampisehoana amin'ny rehetra fa efa navoaka tamin'ny toerana nitazonana azy ilay nantsoin'ny mpiserasera manerantany azy hoe Razily, izay ihany. Angamba fifanarahana teo amin'ny minisitry fiarovana sy ny diplaomaty nankaty Madagasikara hitaratra ny fivoaran'ny raharaha ny hampisehoana an-d Razily ampahibemaso eny Ambohijatovo ho hitan'ny rehetra.
Eto ihany koa na izany aza no ahitana taratra ny fifamatoran'ny mpiserasera manaraka ny toe-draharaha eto madagasikara sy ny mpitolona tsy mahita izany aterineto izany. Ny mpiserasera dia mahalala azy soa amantsara noho ny fanentanana ny hanafahana azy, ary nisy aza ny 'fanangonan-tsonia' ho amin'izany firaisankinam-pitakiana izany. Betsaka ihany anefa ireo nanatrika ny fihetsiketsehana tamin'ny fotoana nandraisany fitenenana voalohany no tsy mahalala azy akory fa gaga manontany hoe "iza io". Vao nahita ny sariny tamin'ny vohikala iray manko aho dia nanontany izay fantatro ho mpankeny hoe inona no nambarany, fa tsy nifantoka angaha ny olona satria tsy fantany ny valeran'ilay olona aty amin'ny serasera dia tsy mahatadidy izay nolazainy. Tsy maintsy nohazavaina ary hoe ilay lehilahy nibaby kitapo menamena nitondra saina iny dia tadidiny fotsiny fa nisy izany olona izany tokoa niteny teny ambony sehatra.
Dia toy izany ihany koa ny tao amin'ny fandaharan'ny Tvm "Tahala" tamin'ny alakamisy alina teo izay niadian'i Alain Andriamiseza sy Ramasy Adolphe hevitra saingy indrisy moa fa efa hifarana ny fandaharana vao nahita aho. Tsy nahita akory aza fa nandre ny adihevitra ka taitra aho, satria namadibadika fantsona teo ny mpijery fahitalavitra tato an-trano. Tsy misy na inona na inona azoko nampitaina io fandaharana io noho izany. Tonga tao an-tsaiko tampoka avy hatrany fa fihatsarambelatsihy ataon'ny Tetezamita ankehitriny fotsiny ny fandaharana ataony fakana naoty, satria manko mandalo eto ny solontena vahiny maro mitady fifandaminana sy manao ny fampihavanana, fa raha vao lasa ireo vahiny miserana ireo dia ahiana ho nofinofy indray izany mpanohitra tafiditra amin'ireny sehatra ireny. Ny mahavariana, nefa tsy mampaninona satria fanararaotra ny zaatra rehetra, dia toa manaiky hofandrihina amin'ny zavatra tahaka ireny ny mpitarika ny mpomba ny ara-dalàna. Izany hoe ilaina ny antoka an-taratasy raha azo atao, na fanambarana ampahibemaso fa omena sehatra hatrany ny mpanohitra, dia ren'ny besinimaro ny fanambarana na an-tanana ny taratasy fiantohana fa malalaka ny fitenenana vao miditra amin'ny sahala amin'ireny. Manjary revo amin'ny vonjy tavanandro sy ny miserana hatrany manko isika raha tsy mba mandray fepetra matotra araka ny eritreritro.
jentilisa, zoma 22 mey 2009 amin'ny 21:52